पहाडिया मिडियाले मोदी आउँदा मधेसविरोधी भावना फैलाए
२०७१ साउन २० गते ८:१२
यो काठमाण्डु केन्द्रित र मधेसविरोधी मिडियाले चलाएको हल्ला हो । कसले भन्यो मोदीले संसदमा हिमाल, पहाड र तराई ठाडो चिरा परेको संघीयता होस् भनेर बोलेका छन् भनेर । आफूलाई फाइला हुने किसिमको अर्थ लगाएर हुन्छ ? उनले त हिमाल, पहाड, तराई सबैको भावनाको...
कतारमा मान्छे बेच्दा राष्ट्रवादी हुने, पानीको सदुपयोग गर्दा राष्ट्रघाती हुने ?
२०७१ साउन १५ गते १०:२३
नेपालमा हाइड्रो पावरको विकास भयो भने आफ्नो व्यापार धारासायी हुन्छ भन्ने एकथरि माफियाहरु छन् । ब्याट्री, इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यापारीहरुको ठूलो सञ्जाल माथिसम्मै छ । भन्सारमा गएर हेर्नुस उर्जाको विकल्पमा नेपालमा ब्याट्री, इन्भर्टर र जेनेरेटर बाहिरबाट कति आउँने गरेको छ थाहा हुन्छ । अर्को...
‘डनहरुको संरक्षण गरे ओलीलाई सहयोग हुँदैन’
२०७१ साउन ३ गते ९:२९
निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनालले महाधिवेशनको समापन समारोहमा पार्टीभित्र कुनै पनि अनुचित काम, अनुचित गतिविधि र गुण्डागर्दीले प्रश्रय पाउनु हुँदैन भन्नुभएको छ । हिजो कसले के गर्‍यो, त्यसमा नजाऔं अब कसैले पनि पार्टीको कभरमा गुण्डागर्दी गर्नेलाई संरक्षण दिने र आफ्नो फाइदाका लागि त्यस्ता प्रवृत्तिका मानिसहरुलाई...
२०७१ असार १४ गते १६:५५
म गतिशील मान्छे हुँ । म डाइनामिक मान्छे हुँ, गतिशीलतामा विश्वास गर्छु । म कामकाजी मान्छे हुँ । कामकाजमा विश्वास गर्छु । म परिणाममुखी मान्छे हुँ । म परिणाममा विश्वास गर्छु । म गफगाफमा समय बर्बाद गरेर बस्ने मान्छे होइन । राष्ट्रपतिजस्तो सम्माजनजनक स्थानमा...
महरा भन्छन्, ‘एमालेमा ओली आए पनि ठीकै, नेपाल आए पनि ठीकै’
२०७१ असार १२ गते १७:१०
एमाले यो देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेकै छौं । तर एमालेको महाधिवेशनमा के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हामीले देखेको के हो भने एमाले कम्युनिष्ट सिद्धान्तको जगमा निर्माण भएको पार्टी हो । यो...
एमाले नेताहरु पँधेर्नीका जस्ता कुरा गर्दै हिंडेका छन्
२०७१ असार ३ गते ७:४९
पुष्प तिमिल्सिना एनआरएन आईसीसी सल्लाहकार समिति सदस्य हुन् । ४८ वर्षीय तिमिल्सिनाको नेपालस्थित ठेगाना राम्जादेउराली–८ पर्वत हो । उनी पछिल्लो १२ वर्षदेखि स्पेनमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । स्पेनमा उनको रेष्टुरेण्ट, सुपर मार्केट र चिज कम्पनीमा लगानी छ । अघिल्लो कार्यकाल एनआरएन आईसीसी सदस्य...
कसैले समानान्तर कमिटी बनाएको भए त्यो सफल हुँदैन: प्रचण्ड
२०७१ जेठ २५ गते ४:५२
एकीकृत माओवादीभित्र त्यस्तो भएको छैन । मैले सम्बन्धित कमरेडहरुसँग कुरा गर्दा त्यो होइन भन्दै केही कमरेडहरुको सुझाव आएको हो भन्नुभएको छ । हामी सामूहिक रुपमा प्रशिक्षणको कार्यक्रम लिएर जिल्लाजिल्ला जाँदैछौं । कसैले समानान्तर रुपमा समिति बनाउन खोजेको हो भने त्यो सफल हुँदैन । हामी माओवादी...
२०७१ जेठ १९ गते ११:३७
खाली पद र सिटका विभाजनका आधारमा मात्र एकता हुन सक्दैन । सिद्धान्त र नीति एक भयो भने सेल कमिटीमै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ । एमाले वा एमाओवादीबीच एकता हुनसक्छ । उनीहरु दुईमध्ये एउटा अर्काको नीतिमा जाँदा फरक पर्दैन । किनभने उनीहरु नजिक छन्...
२०७१ जेठ ५ गते १२:३७
युवराज लामा केही दिनअघिसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । तर सरकारमै रहेको अर्को दल एकीकृत माओवादीको सिफारिसमा । अहिले युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेल । गत फागुन १३ मा...
मिडिया कमजोर बनाएर श्रमजिवीको हित हुन्छ भन्ने पक्षमा छैन: विष्ट
२०७१ वैशाख २४ गते ८:१५
मैले व्यवस्थापनको पक्षमा वकालत गरेको होइन । मिडियाले उद्योग सरहको मान्यता पाएको छैन, त्यो पाउनुपर्‍यो । उहाँहरुको बिजनेश ‘प्रमोशन’ को कुरा उहाँहरुले नै गर्ने हो । त्यसको नाफा घाटाबारे हामीलाई धेरै सरोकार छैन । तर एउटा कुरा के हो भने मिडिया कमजोर बनाएर श्रमजिवीको...
माक्र्सवादी पद्धतिमै नयाँ शक्ति निर्माण हुन्छ
२०७१ वैशाख ४ गते ६:२३
बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेता, एमाओवादी तपाईंले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ । यो कस्तोखालको शक्ति हो ? समाज र दुनियाँ गतिशील हुन्छ । त्यसैले हामी सबै परिवर्तनसँगै नयाँ–नयाँ बन्दै जानुपर्छ । राजनीतिक पार्टी, विचार नेतृत्व पनि समयको आवश्यकताअनुसार नयाँ हुँदै जानुपर्छ । यसै सन्दर्भमा...
मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘विदेशी ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीलाई देश द्रोहको मुद्दा लगाउँछु’
२०७० चैत २४ गते ११:२३
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले चर्चामा छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका पण्डित सरल र निडर स्वभावका छन् । उनले विदेशी ग्रिनकार्ड, डिभी र पीआरबाहक सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने सार्वजनिक चेतावनी मात्र दिइरहेका छैनन्, त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत...